Izindaba - Yini okufanele ngiyinake lapho ngihlola amathangi okugcina uketshezi lwe-cryogenic?
Ukuhlolwa kwethangi lokugcina uketshezi lwe-Cryogenic kuhlukaniswe ukuhlolwa kwangaphandle, ukuhlolwa kwangaphakathi nokuhlola okunezici eziningi.Ukuhlolwa ngezikhathi ezithile kwamathangi okugcina i-cryogenic kuyonqunywa ngokuvumelana nezimo zobuchwepheshe zokusebenzisa amathangi okugcina.
Ngokuvamile, ukuhlola kwangaphandle kwenziwa okungenani kanye ngonyaka, ukuhlolwa kwangaphakathi okungenani kanye njalo eminyakeni emi-3, futhi ukuhlola okunezici eziningi okungenani kanye njalo eminyakeni engu-6.Uma ithangi lokugcina izinga lokushisa eliphansi linempilo yesevisi engaphezu kweminyaka engu-15, ukuhlolwa kwangaphakathi nangaphandle kuzokwenziwa njalo eminyakeni emibili.Uma impilo yesevisi iyiminyaka engama-20, ukuhlolwa kwangaphakathi nangaphandle kuzokwenziwa okungenani kanye ngonyaka.
1. Ukuhlolwa kwangaphakathi
1).Ukuthi kukhona ukugqwala okubolayo endaweni engaphakathi kanye nethangi lokugcina lokuxhuma emgodini, nokuthi ngabe kukhona ukuqhekeka komthungo wokushisela, indawo yokushintsha yekhanda noma ezinye izindawo lapho ingcindezi igxile khona;
2).Uma kunokugqwala endaweni engaphakathi nengaphandle yethangi, ukukala ukushuba kwezindonga eziningi kufanele kwenziwe ezingxenyeni ezisolwayo.Uma ubukhulu bodonga olulinganisiwe bungaphansi kogqinsi oluklanyelwe udonga oluncane, ukuqinisekiswa kwamandla kufanele kuphinde kuhlolwe, futhi kusikiselwe ukuthi kungaqhubeka yini ukusetshenziswa kanye nokucindezela okuphezulu okuvumelekile okuvunyelwe kufanele kubekwe phambili;
3).Uma udonga lwangaphakathi lwethangi luneziphambeko njengokubola kwe-carburization, ukugqwala kwengcindezi, ukugqwala kwe-intergranular kanye nokuqhekeka kokukhathala, ukuhlolwa kwe-metallographic kanye nokulinganisa ubulukhuni bobuso kuzokwenziwa, futhi umbiko wokuhlola uzothunyelwa.
2. Ukuhlolwa kwangaphandle
1).Hlola ukuthi ingabe ungqimba olunqanda ukugqwala, ungqimba olufakwa ngaphakathi kanye ne-nameplate yempahla yethangi lokugcina akulungile, nokuthi ingabe izesekeli zokuphepha namadivayisi okulawula aphelele, ayazwela futhi athembekile;
2).Kungakhathaliseki ukuthi kukhona ukuqhekeka, ukuguqulwa, ukushisa kwendawo, njll endaweni yangaphandle;
3).Ukuthi umthungo wokushisela wepayipi elixhumayo kanye nezingxenye zokucindezela ziyavuza, kungakhathaliseki ukuthi amabhawodi okubopha aqinile, noma ngabe isisekelo siyacwila, siyatsheka noma ezinye izimo ezingavamile.
3, Ukuhlola okuphelele
1).Yenza ukuhlola okungenakonakala ku-weld eyinhloko noma igobolondo, futhi ubude bokuhlola indawo buzoba u-20% wesamba sobude be-weld;
2).Ngemva kokuphumelela ukuhlolwa kwangaphakathi nangaphandle, yenza ukuhlolwa kwe-hydraulic izikhathi ezingu-1.25 zokucindezela kokuklama kwethangi lokugcina kanye nokuhlola okungangeni moya ekucindezelweni kokuklama kwethangi lokugcina.Enqubweni yokuhlola engenhla, ithangi lokugcina kanye nokushisela kwazo zonke izingxenye akuvuzi, futhi ithangi lokugcina alinawo ukuguqulwa okungavamile okubonakalayo njengokufanelekile;
Ngemva kokuphothulwa kokuhlolwa kwethangi lokugcina izinga lokushisa eliphansi, umbiko kufanele wenziwe ngokuhlolwa kwethangi lokugcina, obonisa izinkinga nezizathu ezingasetshenziswa noma ezingasetshenziswa kodwa ezidinga ukulungiswa futhi ngeke zisetshenziswe.Umbiko wokuhlola kufanele ugcinwe efayelini ukuze ulungiswe futhi uhlolwe esikhathini esizayo.
Isikhathi sokuthumela: Dec-27-2021